Ny androaniko | 3
[Ankapobeny ] 04 Janoary, 2021 19:23
Na niantomboka tamin'ny ranomaso fa nilaozan'ny namana tiana aza ny 2020, ary nofaranana tamin'ny fihibohana satria izay no fepetra noraisin'ny fanjakana mba tsy hampirongatra indray ny valan'aretina COVID-19 izay namely mafy tokoa ny firenenay eto Italia, dia tsy azo lazaina fa ratsy izy fa navesatra fotsiny.
Ary teny anelanelan'ny janoary sy desambra teny dia nisy tokoa ny lesona nomeny ho an'ny zanak'olombelona : iaino arak'izay azo atao ny anio, sitraho ny bitika atolotry ny fiainana fa sarobidy izany rehefa tsy afaka atao intsony.
[Ankapobeny ] 11 Oktobra, 2020 20:34
Ny reny sy ny renibe taloha dia nanao hefin-tsikina tambonin'ny akanjony ho fiarovana ireny satria tsy dia nanana akanjo maro nisolosoloana rizareo. Mora kokoa manko ny manasa ny hefin-tsikina izay vita amin'ny hasy ny ankamaroany, noho ny akanjo na pataloha na somizo vita amin'ny lamba hafa.
Fiarovana ny akanjo noho izany no tena asan'ny hefin-tsikin'i nenibe, kanefa ambonin'izay dia :
Natao hibatana ny vilany mamay izy fony mbola tsy nisy ireny "fibatam-bilany" ankehitriny ireny.
Tsy nanano-sarotra ny namafa ny ranomason'ny ankizy, sy indraindray, manadio ny tarehy misolitiky ny loto.
Rehefa any am-pisoko i nenibe dia ny hefin-tsikina no itondrany ny atody, na ireo akohokely mila velomina, na ireo atody efa mitady ho foy izay apetrany eo akaikin'ny fatana hahazo hafanana mba hanamora ny fahafoizany.
Rehefa misy vahiny mamangy dia natao fiafenan' ireo zaza saro-kenatra ny hefin-tsikin'i nenibe. Avy tamin'izany no nahatonga ilay fomba fiteny hoe "miafina anaty atin'akanjon-dreniny".
Rehefa mangatsiatsiaka ny andro dia ampakarin'i nenibe izy iny hanafanany ny sandriny sy ny sorony. Rehefa andro mafana kosa dia hamafany ny hatsembohany rehefa izy miketrika sakafo eo amorom-patana.
Natao hikopakopahana afo mitady ho faty ihany koa iny hefin-tsikina ela niasana iny.
Mbola iny ihany koa no hitondrana ny ovy sy ny kitay mankany an-dakozia.
Raha eny an-tsaha dia izy no solon'ny harona hasiana ireo karazam-bokatra : rehefa voaoty ny pitipoà dia tonga koa ny anjaran'ny laisoa. Rehefa tapitra ny fotoanany, dia hanangonana ireo paoma latsaka avy eny ambony hazo izy.
Rehefa misy vahiny tsy ampoizina dia mahavariana fa haingana dia haingana mihitsy ny hamafan'iny hefin-tsikina iny ny vovoka amin'ny entana.
Rehefa amin'ny ora fisakafoanana dia ahofahofan'i nenibe avy eo an-davarangana ny hefin-tsikina, hilazana amin'ny vatan-dehilahy eny an-tsaha fa masaka ny sakafo ka mila mody amin'izay.
Ampiasain'i nenibe hamoahana ny mofomamy avy ao anaty lafaoro tanimanga ihany koa izy ka apetrany hampangatsiahana eo amin'ny sisim-baravarankely.
Mbola mila taona maromaro angamba vao hisy hahaforona fitafy afaka hifaninana amin'iny hefin-tsikina efa tontatonta nefa mahavita be iny.
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 52 53 54 Manaraka»